You are here: Home Encyclopedia site
1. မင်းကြီးမျက်နှာရှည် - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
... တင်ပြထားသည်။ Download Related Articles ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ စာပေဆောင်းပါးများ ...
2. ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် ပုဂံရွှေနန်းတော်ကြီး - ထူးထူးဝင်း(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
... ပုဂံ၊ ပုဂံထဲက သမိုင်း - မြသန်းတင့် ပုဂံမင်းဆက် လင်္ကာ - ပုရိသ ပန်သေ့-ပန်းသေး - သန်လျင်မြဦး ပုဂံခေတ် စာမေးပွဲ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်) ပုဂံမင်းသားနှင့်လယ်သူမ မိအံ့ကြီး - မြကေတု ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများ ...
3. မြန်မာစာပေနှင့်တရုတ်ပြည်သစ် - ဆန်းထွန်း
eBook file size: 147 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ လူထုဂျာနယ် အမှတ် ၂၁ ထုတ်တွင် ပါသော မြန်မာစာပေများ တရုတ်ဘာသာပြန်အနေဖြင့် ထားရှိသင့်ပုံကို ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်းမှ အကျိုးသင့်အကြောင်သင့် တင်ပြထားသော ...
4. ဣန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုမှ ယိုးဓယားယဉ်ကျေးမှုသို့ - ဆန်းထွန်း
... ဗဟုသုတရဖွယ် အဖိုးတန် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်​ပါသည်။ Download Related Articles ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ စာပေဆောင်းပါးများ ...
5. အသျှင်ဉာဏိဿရမှ ဆန်းထွန်းသို့ - မောင်သိင်္ဂါ
eBook file size: 92.4 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၅၁ ခုနှစ်ထုတ် လူထုဂျာနယ် အမှတ် ၂၁ တွင် ပါသော ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ရဟန်းဘဝမှ သိက္ခာချ လူထွက်ခြင်း အကြောင်းကို မောင်သာနိုး၏ ကလောင်အမည် ...
6. ဇိနာရာမ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 94.2 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ စာစဉ် ၄၁ ထုတ် အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles-
7. ပေါင်းကူးနိယာမ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 67.7 KB ebook pages: 10 Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၂ ထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
8. သို့ငင် သို့ဆင့် - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 90.2 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ အမှတ် ၅၉ ထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
9. မယ်​တော်နို့ရည် - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 91.3 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အမှတ် ၄ ထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
10. အင်္ဂလိပ်ခေတ် ပထမ-ပထမကျော် - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 100 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အတွဲ ၃၄၊ အမှတ် ၇ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
11. သက်ရှည်သော်လည်း ဘုန်းမကြီး - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 90.6 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၉ ထုတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
12. ရောဟိဏီနတ်သမီး - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 94.0 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၁၂၊ အမှတ် ၁၁ ထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါ သည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
13. မဟာပစ္စရီအဋ္ဌကထာ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 356 KB ebook pages: 11 Publication: ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁ ထုတ် ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
14. သရဿတီပူဇာ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 212 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
15. အပျိုတန်မဲ့ ပါးမှာမှဲ့ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 194 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း(ခ)အသျှင်ဉာဏိဿရ(မန်းတက္ကသိုလ်)၏ ...
16. ကံကုတ်ဟူသည်မှာ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 56.9 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း၏ စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
17. ကိုင်းစား မနုရာဇာ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 214 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း၏စာအုပ် ဆောင်းပါးများ ...
18. ပုဂံခေတ် စာမေးပွဲ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 48.9 KB ebook pages:3Publication: ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles ဆရာကြီးဦးဆန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
19. အာစရိယာနုဿတိ - ဆန်းထွန်း(မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 743 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download